မှိုင်းခေတ်အောင်(ရေကျော်) – “ ၀ိညာဉ်တော်များထံ အပ်နှံခြင်း” | MoeMaKa Burmese News & Media
မှိုင်းခေတ်အောင်(ရေကျော်) – “ ၀ိညာဉ်တော်များထံ အပ်နှံခြင်း”
မင်း ဘယ်လိုဖြေမလဲ သူငယ်ချင်း ….
မင်းဘယ်လိုဖြေမလဲ သူငယ်ချင်း ….
သွေးသောက်သစ္စာ ဆိုကြပါစို့လား သူငယ်ချင်း။ ။